Chii Chitsva muZvitsuwa zveBahamas munguva yechando
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Bahamas Kuputsa Nhau » Chii Chitsva muZvitsuwa zveBahamas munguva yechando
avhiyesheni • Awards • Bahamas Kuputsa Nhau • Bahrain Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Zvirinani muBahamas ino yechando sezvo nyika inogamuchira vashanyi vekunze kuti vafarire zuva, jecha uye gungwa. Kubva kuvhurwazve kwehotera nemitambo inonakidza kuenda kuBahama Out Islands Promotion Board yemadhora mazana mashanu emadhora, Bahamas ndiyo inzvimbo yakakwana kune vafambi vanotsvaga kupukunyuka kubva kuchando mwaka uno wezororo.
Ministry of Tourism Inotangisa Inopindirana Chitsuwa Nongedzo - Mukuyedza kuronga kuronga kwakachengeteka, kunodiwa kwazvo kweBahamian kutiza zvakanyanya musono, Ministry of Tourism yakaunza inoshanda mepu iyo inopa vashanyi nhepfenyuro yechitsuwa-ne-chitsuwa yematanho epamusoro-soro, kusanganisira maawa ebhizinesi ekushanda, kuwana kwemahombekombe uye nezvimwe.
Hotera Kuvhurazve Kwese Bahamas - Atlantis Paradise Chitsuwa yakarongerwa kuvhurwa muna Zvita 10, 2020, uye Eleuthera's French Leave Resort yakagadzirirwa kuvhurazve Zvita 15, 2020. Grand Hyatt Baha Mar uye yaExuma Grand Isle Resort & Spa ese akarongerwa kuvhurazve Zvita 17, 2020. Shangu Royal Bahamian Resort ichavhurazve Ndira 28, 2021, apo Shangu Emerald Bay ichavhurazve Kukadzi 1, 2021.
Exuma uye Long Island Airport Kuwedzera[MHURE (1) s - Exuma International Airport iri kuwana hukuru hukuru. Iyo purojekiti, iyo yakarongerwa kutanga mwedzi unouya, ichawedzera iyo terminal kubva ku2,000 square tsoka kusvika 60,000 mativi emakumbo. Nyika iri kuronga kuwedzera kwekuwedzera kwendege kuLong Island, inotarisirwa kupedzwa munaKurume 2022. Iyo chirongwa ichawedzera nhandare yendege kubva pamamirioni zviuru zvina kusvika pamamirioni mazana matanhatu.
Kuti uwane yakazara, inokwidziridzwa kudhara yezvibvumirano uye mapakeji eBahamas, shanya www.bahamas.com/deals-packages.
Kunze Island Nhema Chishanu Mhepo Kiredhiti - Iyo Bahama Out Islands Yekusimudzira Bhodhi iri kupa $ 500 mhepo kiredhiti ino Nhema Chishanu kubatsira vafambi kuronga yavo inotevera Bahamian zororo. Chikwereti chinoshanda kana usati-kubhuka mweya-unosanganisa 7-husiku pasuru pane inotora chikamu Bahama Out Islands Bhodhi reBhodi nhengo. Vafambi vanofanirwa kubhuka naNovember 30, 2020 uye vafambe muna Ndira 31, 2021. Mazuva ekusviba anoshanda.
Atlantis Kutanga Husiku Pasuru Pasuru - Mukupemberera kuvhurwa kweiyo resort, Atlantis iri kupa vaenzi yavo husiku hwekutanga mahara neusiku husiku hushoma kugara. Inogadziriswa pakati paNovember 10 - 22 uye inoshanda pekugara pakati paZvita 10 - 17.
Baha Mar Kurota Kure uye Getaway Package - Grand Hyatt Baha Mar iri kupa vaenzi 20 muzana kubva ingori panguva yekuzororerwa kwaDecember 17 kuvhurwa. Bhuku raDecember 6, 2020 rekugara kusvika Kubvumbi 4, 2021.
Coral Sands Resort Chikwereti - Iyo inodiwa Harbor Island resort iri kupa $ 100 resort kiredhiti inosanganisirwa yezuva nezuva kondinendi yekudya kwemangwanani kwemaviri uye kuwana kune ese asiri emota mitambo yemvura kana uchigara kwehusiku hushoma. Chipo ichi chinoshanda kuburikidza naDecember 15, 2020.
ZVINOKOSHA uye ZVINOKOSHA
Kufamba Kwevhiki nevhiki Magellan Mipiro Inoziva Iyo Bahamas 'Zvichiri Rockin' Campaign - Bahamas Ministry of Tourism & Aviation's Still Rockin 'mushandirapamwe wakapihwa yakanakisa kushambadzira / kushambadzira. Mumashure meHurricane Dorian, mushandirapamwe uyu wakaratidza zvitsuwa zvihombe gumi nemana zveBahamas zvisina kukanganiswa nedutu, izvo zvakakonzera gore rekuputsa rekodhi renyika revashanyi vanosvika mamirioni 14 muna7.2. yakapihwa sirivheri munzvimbo yekushambadzira yeTV yekutengesa chikamu.
Iine zvitsuwa zvinopfuura mazana manomwe uye cays uye 700 yakasarudzika chitsuwa nzvimbo, Iyo Bahamas iri makiromita makumi mashanu chete kubva kumahombekombe eFlorida, ichipa nyore kubhururuka kure kutiza iyo inotakura vafambi kubva kune avo ezuva nezuva. Zvitsuwa zveBahamas zvine hove dzepasi rose, kudhizaivha, kukwasva chikepe uye zviuru zvemamaira epasirose emvura anoyevedza uye mahombekombe akamirira mhuri, vakaroora uye vafambi. Ongorora zvese zviwi zvaunofanira kupa pa www.bahamas.com kana uri Facebook, YouTube or Instagram kuti uone nei Zviri Nani muBahamas.